Nhaurwa yanhasi inoenderera neiyo Ini ndiri Mac timu | Ndinobva mac
Enderera nechikwata cheNdinobva kuMac yanhasi kiyi
Zuva rakakosha revashandisi veApple mushure memavhiki mashoma iyo WWDC yanga iri pamiromo yemunhu wese, nhasi Muvhuro Chikumi 4 uye Apple yatove nezvose zvakagadzirira kugadzira runyorwa rwekutanga umo rwuchazotiratidza chii chitsva mu macOS, iOS, watchOS, uye tvOS.
Kwete akawanda ruzivo anozivikanwa nezve iyi mharidzo uye ndeyekuti Apple inoita kunge yakadzora kuburitsa kwenhau zvakanyanya, saka ngativei netariro kuti nhasi vachatiratidza dzimwe nyaya dzinonakidza uye pamusoro pazvo zvese imwe yezvakakosha zvakakosha maererano nesoftware nhau, isu tichaona kana pakupedzisira pane imwe Hardware kana kwete mumaawa mashoma.
Zvese zvakagadzirira kutevedzera yakakosha rarama
Pano unogona kunyora pasi kero yako yeemail patinotanga iyo mhenyu kufukidza iyo inokuzivisa iwe nekukasira, sezvo gore rega rega tichava nevatinoshanda navo kubva kuActualidad iPhone uye Actualidad Gadget, tichigovana dzese nhau idzo Apple inopa. Mushure mehurukuro yakakosha isu tichavawo neruzivo rwese maererano nezve chiitiko pane blog, tichava ne # podcastapple yakakosha kuti iwe unogona kutevedzera mhenyu kubva kugeri yedu Youtube uyezve pane yako yaunofarira podcast player.
Rangarira zvakare kuti iwe unayo pasocial network e Ini ndinobva kuMac saTwittere, kutevedzera zviripo kuratidzwa kwevakomana veCupertino masikati ano. Zvinogoneka here kuti Apple ichatishamisa nechimwe chinhu chitsva maererano nehurdware? Vanonyanya kutarisira vanofunga kuti hongu, tichachengetedza zvimwe «hype»Zvemasikati ano uye ndinovimba ichave inonakidza hurukuro maererano nezviratidziro. Saka ikozvino iwe unoziva, isa yako email kero muCoverit kana pinda pawebhu kubva 18:30 neMuvhuro kuti utevere iyo Apple keyword yeiyi WWDC 2018.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Enderera nechikwata cheNdinobva kuMac yanhasi kiyi
Yakagadzirirwa kutarisa nguva paApple Watch yake panguva yekumira